Myat Mon's Likes - Myanmar Network
Myat Mon's Likes
Back to Myat Mon's Page
Digital ပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်မှ သင့်မျက်လုံးကိ… [Zawgyi] လူအများစုသည် မျက်စိကို ကာကွယ်သည့် မျက်မှန်များတပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ Laptop, Tablet နှင့် Smart Phone အစရှိသော digital ပစ္စည်းများရှေ့တွင် အချိန်တော်တော်များများ သုံးကြပါသည်။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက… Discussion Digital ပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်မှ သင့်မျက်လုံးကိ… 54 Likes
First impression ကောင်းစေရန် ပြုလုပ်နည်း (၁၀… [Zawgyi] သင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ လူတစ်စုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စရှိလို့ ပထမဆုံးတွေ့တော့မယ်ဆိုရင် သင် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လူတွေက ဘယ်လောက်မြန်မြန်အတွင်းမှာ ချနိုင်သလဲဆိုတာကို သင် သိပ… Discussion First impression ကောင်းစေရန် ပြုလုပ်နည်း (၁၀… 45 Likes ရေကြီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝေါဟာရများ ယခုအခါမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာတော်တော်များများမှာ ရေကြီးနေပါတယ်။ ရေကြီးနေတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီသင်ခန်းစာကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အောက်မှာ ရေကြီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရအတေ… Discussion ရေကြီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝေါဟာရများ 52 Likes UK စာမေးပွဲသတင်းများ ( ဩဂုတ်လ ၂၀၁၅ ) YLE (Young Learner) Exam Registration အောက်တိုဘာလ ( ၂၇) ရက်တွင် တွင် Young Learner Exams စာမေ:ပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲကြေးများကို စက်တင်ဘာလ (၁) ရက် နေ့မှ (၁၀) ရက် နေ့အတွင်း တနင်္လာေ… Discussion UK စာမေးပွဲသတင်းများ ( ဩဂုတ်လ ၂၀၁၅ )7Likes
အချိန်ကာလပြ အီဒီယမ် ၁၅လုံး တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးကို ပြတဲ့ အီဒီယမ်တွေ အသုံးအနှုန်းတွေ အနက် နမူနာ လေ့လာကြည့်ဖို့ ရွေးချယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ After hours - ညနေဘက်၊ ညဘက်၊ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးလုအချိန် (… Discussion အချိန်ကာလပြ အီဒီယမ် ၁၅လုံး 51 Likes ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အားကေ… [Zawgyi]ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှာ အသုံးပြုဖို့ အားကောင်းတဲ့ ဝေါဟာရတွေ လေ့လာလိုတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရေးဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသူကို ကူညီရေးပေးဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အောက်မှာ ဖော်ပြထ… Discussion ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အားကေ… 153 Likes ဆင်တူရိုးမှားသတိထားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၄) conﬁdant, conﬁdante နှင့် conﬁdent ၄င်းစကားလုံးသုံးလုံးသည် စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်ပါဆင်တူသဖြင့် မှားတတ်ပါသည်။ CONFIDANT (ကျားမနှစ်မျိုးလုံးတွင်သုံးသည်။) CONFIDANTE (မတွင်သာသုံးသည်။) သည် “လူယုံ၊… Discussion ဆင်တူရိုးမှားသတိထားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၁၄)4Likes အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၁) [Zawgyi]ဒီတစ်ပါတ်မှာ အ၀တ်အစား၊ အ၀တ်အထည်တို့ကို အခြေခံထားတဲ့ အီဒီယမ်တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်း တစ်ခုချင်း၏ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ဥပမာများနဲ့တကွ ဖော်ပြထားပ… Discussion အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၁) 18 Likes လူမှုဆက်ဆံရေးစကားလုံးအမျိုးမျိုး လူဟာသဘာဝအားဖြင့် လူမှုရေးသတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ Man is by natureasocial animal. လို့ Aristotle ကဆိုတယ်။ လူဟာတစ်ယောက်တည်းမနေတတ်။ နေလို့မဖြစ်။ တူရာတူရာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေတတ်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါ… Discussion လူမှုဆက်ဆံရေးစကားလုံးအမျိုးမျိုး 87 Likes စကားလုံးတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်ပါစေ ယခုတစ်လောတွင် စာရှည် စာပွရန် ရည်ရွယ်၍ ဖြစ်စေ၊ နားမလည်၍ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ စကားလုံးများအား ပိုမိုသုံးစွဲလာသည်ကို တွေ့နေရသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အလကားပေးသည့် လက်ဆောင် “a free gift” ဆိုသည့်ေ… Discussion စကားလုံးတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်ပါစေ 19 Likes အားသာချက်ကို ပိုကောင်းအောင် တွန်းအားပေးပါ (P… သြဇာသက်ရောက်ခြင်းဆိုတာ လိုချင်တာရဖို့ အခြားသူများရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ကတိက၀တ်ပြုမှုကို ရယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေက မိမိအပေါ် အထင်အမြင်၊ ပြုမူပြောဆိုတဲ့ အမူအရာ၊ စကားပြောပုံ၊ အခြားသူများနဲ့ ဆက်ဆံရေး စတာတွေန… Discussion အားသာချက်ကို ပိုကောင်းအောင် တွန်းအားပေးပါ (P… 50 Likes လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံ… [Zawgyi] မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖော်နှစ်ယောက်ကြားမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူအခြင်းခြင်း အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲအချို့နဲ့ သုံးနှုန်းပုံ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေကိုပါ ပြော… Discussion လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံ… 30 Likes ဗြိတိသျှကောင်စီရှိ အခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဗြိတိသျှကောင်စီရှိ WAVE အဖွဲ့မှလာမည့်သင်တန်းကာလအတွင်း၌ အခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမည့် သင်တန်းအားစတင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် အသက် (၁၈)နှစ်နှင့်အထက် တက်ရောက်လိုသူများ maungshweyee@gmail.com… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီရှိ အခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်6းLikes အသုံးများသော အတိုသုံးလေးများ - ၁ Take it easy အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။ အဓိပ္ပါယ်။ To relax; to stop working so hard; to calm down အနားယူပါ။ သိပ်လဲအလုပ်အရမ်းမလုပ်နဲ့။ စိတ်လျှော့။ တစ်ယောက်ယောက်အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေသည့်အခါ၊ အလွန်ပြင်း… Discussion အသုံးများသော အတိုသုံးလေးများ - ၁ 16 Likes စာဖတ်သူအား သင့်တင့်လျှောက်ပါတ်စွာခေါ်ဆိုနည်းမ… အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အီးမေးလ်ရေးသားရာတွင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ စာဖတ်သူကိုဘယ်လိုအစချီပြီး ခေါ်မလဲဆိုတာပါ။ မြန်မာတွေလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဒုတိယ (သို့) တတိယဘာသာအဖြစ်ပြောဆိုသူတွေသာမက မိခင်ဘာသာအဖြစ… Discussion စာဖတ်သူအား သင့်တင့်လျှောက်ပါတ်စွာခေါ်ဆိုနည်းမ… 55 Likes စိတ်လက်လှုပ်ရှား expression များ [Zawgyi] အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရေးသားတဲ့အခါ native speakers တွေလို သဘာဝကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ အတွက် expression များများကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ အခုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖေါ်ပြတဲ့ expression တစ်ချို့ကို… Discussion စိတ်လက်လှုပ်ရှား expression များ 59 Likes Analogies (တူညီချက်များ) အပိုင်း (၁) by Daw… Analogy ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုများတခုနှင့်တခုမည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ e.g. Nose is to smell as tongue is to taste. ဥပမာ။ "နှာခေါင်း" နှင့် "လျှာ"ကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် "နှာခေါင… Discussion Analogies (တူညီချက်များ) အပိုင်း (၁) by Daw… 25 Likes ဘာကြောင့် မီလျံနာမဖြစ်သေးတာလဲ? မီလျံနာဖြစ်ချင်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မဖြစ်သေးတာလဲ? ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲ? ဘာတွေ ပြုပြင်ရမလဲ? Entrepreneur.com ရဲ့ Contributer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Timothy Sykes ကတော့ အောက်ပါအချက်တွေကြော… Discussion ဘာကြောင့် မီလျံနာမဖြစ်သေးတာလဲ? 18 Likes Certificate in English Language Teaching to… Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) Course - Gain knowledge and skills in ELT based on international best practice. - Be equipped to seek employment in ELT. - Getacertifica… Discussion Certificate in English Language Teaching to… 15 Likes ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များလေ့လာကြသည့် ဘ… [Zawgyi]ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မည်ကဲ့သို့သောဘွဲ့ကိုလိုအပ်ပါသလဲ။ ဘွဲ့ရပြီးသောအခါရရှိသော သင့်အောင်မြင်မှုအပေါ် တက္ကသိုလ်ကရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံများက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ နိုင်ငံတ… Discussion ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များလေ့လာကြသည့် ဘ… 45 Likes English for Hotel and Catering Industry (Uni… ပထမသင်ခန်းစာမှာတုန်းက ဧည့်သည်ကိုနှုတ်ဆက်ပုံ၊ ဖုန်းထူးပုံ၊ အမှာစကား လက်ခံပုံ function တွေကို Can I… ? /Could I … ? , I’d like to ….. စတဲ့ structure တွေနဲ့အသုံးပြုပုံကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်… Discussion English for Hotel and Catering Industry (Uni… 40 Likes